Ukubalwa umntwana inkxaso - Usapho meko - Abaqondisi-mthetho ka-Us-intanethi!
Ukubalwa umntwana inkxaso - Usapho meko
Kwimeko wokuqhawula umtshato okanye okunokukhethwa kuko, usapho inkundla vertical, isixa-mali i-pension ihlawulwe ngo zabazali kuba imfundo abantwanaKuba oku, lowo usebenzisa i-indicative linganisa, ngokucacileyo ngu-nqapha yithi rhoqo. Kwimeko okunokukhethwa kuko zabazali, custody kwaye indawo yokuhlala abantwana banako unikwe omnye wabo, kunye ngokumnika ka-ukuvelelwa amalungelo abanye. Kwi-siseko, omnye ongenawo custody kufuneka ahlawule ukuba omnye umzali umhlalaphantsi ukuba bathathe inxaxheba ulondolozo kunye nemfundo yakhe abantwana (amanqaku kwaye - kwaye - ye-French zasekuhlaleni Ikhowudi). Kwimeko izixhobo zokupeyinta custody, nkqu ukuba iziphumo a unikezelo ka no ixesha ngalinye umzali, intlawulo yesondlo ngo othe emfundo ephakamileyo icebo ayikho ayifakwanga. I-pension imiselwe kuxhomekeke balinde indlela, inani abantwana, iimfuno zabo kwaye imivuzo le omnye lihlawulwa ngubani kodwa kanjalo abo ndiyawazi kuyo. Ukuba abazali musa uyavuma, kubalulekile usapho inkundla vertical, isixa-mali umhlalaphantsi. I-akhawunti kufuneka kuthatyathwa bonke abantwana i-debtor, nokuba union ukusuka apho ngabo derived, uhlahlo-lwabiwo-mali efunekayo ukuze ngamnye kubo: ukutya, izindlu, ezibanzi zezothutho, impahla yokunxiba, ezempilo (umzekelo, ukuba umntwana iimfuno a utshintsho glasses rhoqo ngonyaka okanye iimfuno orthodontic care). Ingaba kuthathelwe ingqalelo zokusebenza kwaye taxable septemba ingeniso (intswela-ngqesho izibonelelo, akufuneki sickness i-Inshorensi, umhlala-phantsi pensions) emva deduction ye-subsistence ubuncinane no isixa-mali RSA, oko kukuthi, aprili. A a ipesenti, ngoko ke, isicelo eso ngokunxulumene uhlobo care kwaye inani abantwana. Kuthatha kwi-avareji phakathi isibhozo kwakunye neshumi zokusebenza umntwana ngamnye. Umgwebi kanjalo uqwalasela umvuzo we-umzali eyamkela intlawulo. Intlawulo umntwana inkxaso sele ukubaluleka phezu kwazo zonke ezinye iinkcitho ye-debtor. Ngo, kubulungiseleli Lobulungisa sele ipapashwe okokuqala, itheyibhile ubhekiso ukuncedisa lwabagwebi kusapho iimeko ukugqiba alimony kwimeko okunokukhethwa kuko zabazali. Esi sihlomelo, ihlaziywa rhoqo, sele kuphela i-indicative ixabiso. Umgwebi ayikho obliged ukuthobela ngayo, nkqu ukuba, eneneni, neemali kugqitywe kwimali yonke kakhulu efanayo ukuba ezo zixhomekeke khona. Kunye umntwana abantliziyo custody wenziwe awarded ukuba umama wakhe, ilungelo ndwendwela kwaye indawo yokuhlala classic, kwaye imithombo taxed ngenyanga kuba i, isikhokelo njengoko ukuba isixa-mali i-pension ihlawulwe yi - uyise uya kuba ngenyanga. Nababini abantwana abantliziyo custody wenziwe awarded ukuba umama wakhe, ilungelo ndwendwela kwaye indawo yokuhlala classic, kwaye imithombo taxed ngenyanga kuba i, isikhokelo njengoko ukuba isixa-mali i-pension ihlawulwe yi-ubawo uya kuba ngamnye umntwana, okanye ngenyanga. Kunye ezintathu abantwana abantliziyo custody wenziwe awarded ukuba umama wakhe, ilungelo ndwendwela kwaye indawo yokuhlala classic, kwaye imithombo taxed ngenyanga kuba i, isikhokelo njengoko ukuba isixa-mali i-pension ihlawulwe yi-ubawo uya kuba ngamnye umntwana, $ ngenyanga. Kuba icebo- ngenyanga, kuba umntwana, i-pension ebeya kuba ezimbini abantwana, ngamnye umntwana, isithathu abantwana, ngamnye umntwana, ubusuku ngenyanga.
Ixesha fixed yi-umgwebi, i-pension ngu uprated rhoqo ngonyaka ngokunxulumene indlela balo obaluliweyo isihlalo - rhoqo price index ye lwamanzi. Uzakufumana ukubalwa i-revaluation kwi-annual site insee I-pension leyo ibisoloko misela kusenokuba kancinane - kodwa kuphela yi-yenkundla usapho imicimbi - ukuba kukho ezibalulekileyo utshintsho ukuba lungelelanisa ngayo (inqaku ka-zasekuhlaleni Ikhowudi).
Umzekelo, xa debtor okanye umntu ofumana i-pension ngu iyonela kububanzi bephepha a landula okanye ebalulekileyo ukwanda ingeniso, kodwa kanjalo xa umntwana ke ifuna ukutshintsha. Kubalulekile ngoko ke kuyimfuneko ukuba ingaba recourse ukuba iinkundla, uze uzalise ifomu Cerfa n° * (fumana apha), ukuze abe yenza entsha isihlalo.
Lawyer a Lawyer: khondo lobungcali-mfundo lilonke, imfundo, iziqinisekiso, umvuzo, uqeqesho
Franceză cred grav avantajul de Emmanuel Macron